Noorweey: Xisbi dhabar jebiyey soomaalida taageeri jirtay | shumis.net
Home » Layaab » Noorweey: Xisbi dhabar jebiyey soomaalida taageeri jirtay
Xisbiga lugu magacaabo Arbeiderpartiet ee AP, oo ah xisbi inta badan soomaalida Noorwaay taageera islamarkaasina siiya codkooda ayaa ka mid noqday xisbiyadda dalkaasi ee dhawaan u codeeyey sharciga dib loogalala noqonayo 1.600 oo soomaali ah.
Sanadkii ina dhaafay ee bishii nofeembar ayaa xisbiyadda dalkaasi waxaa ay inta badan qalinka ku duugeen heshiis ka kooban 18 qodob, oo dhigaya ama xakameeynaya qaxootiga dalkaasi ku qul qulay.
Mid ka mid ah qoddobadda heshiish-kaas ayaa lugu sheegay “in qofka magangalyo doonka ah haddii xaalada dalkiisa hagaagto ama isbadal ku yimaado sababtii markii hore kaliftay inuu dal kale u soo hayaamo, ay dowladdu bilaabeyso siddii ay sharciga ugala laaban laheyd”.
Bishii maarso ee sanadkan ayey dowladda dalkaasi waxaa ay bilowday ineey hishiis-ka xisbiyadu saxiixeen dhaqan geliso. Soomaalida dalkaasi ayaa noqday ajaanibta keliya ee lugu fuliyey. Dhinaca kale xisbiga Sosialistisk Venstreparti ee SV, ayaa aad u dhaliilay kuna tilmaamay go,aankaas mid ka hormanaya xeerarka caalamiga ah ee xaquuqda aadanaha.
Arbeiderpartiet ee AP, ayaa ah xisbiga heeysta kuraasta ugu badan baarlamaanka dalkaasi, waana xisbi sidoo kale saameyn weyn ku leh guud ahaan siyaasadda dalkaasi, saas oo ay tahayna soomaalida waa xisbiga keliya ee ay codkooda siiyaan. Waxaana sidoo kale xubno ka ah soomaali badan oo xilal ka haya golleyaashaa deegaanadda iyo degoomiyanka dalkaasi, mana muuqata talaabo ay kaga hortagi karaan sharciyadda sida gaarka ah loogu qaaday soomaalida Noorweey.
Dhawaan ayaa Noorweey laanta socdaalka sheegtay ineey sharciga deganaanshaha kala laabaneeyso soomaali gaaraya 1.600, 120 ruux oo ka mid ah ayaa loo diray waraaqo loogu sheegayo in lagala laabanayo sharciga.
Title: Noorweey: Xisbi dhabar jebiyey soomaalida taageeri jirtay